I-Semalt: I-Botnet yama-IoT Ama-IJT aphangiwe ihambisa i-DDoS enkulu kakhulu
Njalo ukuhlasela kwe-web kuncike ezinyathelo zokuphepha ezifanele. Kufanele wenze iwebhusayithi yakho igcinwe kusuka kwezinye zalezi zivivinyo ezivamile zeDDoS. Kuzo zonke izimo, ama-botnets aletha iseva phansi, okwenza isayithi lihluleke ukuletha umsebenzi walo oyinhloko. I-network of botnets ingenza ukuhlasela okukhulu kweDDoS futhi inikeze izinkampani eziningi ezingaphumeleli ekuphenduleni kwe-server yabo. Ukuhlasela okukhulu kwe-botnet kwashaya amadivaysi amaningi anesikhungo sokulawula esivamile sokwenza imisebenzi yabo eminingi. Ezimweni eziningi, abantu babhekana nobugebengu obufana nokukhwabanisa kwe-intanethi ngenxa yesimo esibucayi samawebhusayithi amaningi. Isibonelo, ukuhlaselwa kwe-Akamai kwenzeka uma kunesevisi ye-botnet eqondisa isizinda esivamile.
Ukuhlaselwa kwe-IoT DDoS kunomthelela olinganiselwe omkhulu kunokwama-Ellis. Njengo-2010, ukuhlaselwa okuningi kwe-DDoS kwakunamawebhusayithi afana ne-Joomla, okuholela ekukhubazeni yonke imisebenzi yebhizinisi yenkampani. Kusukela kulokhu kuhlaselwa, abantu babe nezifundo ezibalulekile futhi bathola ukuthi kungani kufanele bavikele amaseva abo. U-Nik Chaykovskiy, uchwepheshe we-10 (Semalt , uthi kukhona nezinye izindlela ezingenza kube khona impumelelo yokwenza lezi zinqubo zenzeke. Ezingxenyeni eziningi ze-e-commerce, ukuphepha kwewebhusayithi kuxhomeke kwezinye zezinyathelo abazibekayo ukuze bagweme ugaxekile. Kwezinye izimo, abahlaseli banganqoba ngalezi zinyathelo besebenzisa ukuhlaselwa okulula kokulahla.
Injini Yokusesha ne-Bots
I-SEO ihilela ukusebenzisa i-bots eyinhloko. Amawebhusayithi amaningi axhomeke kuma-bots wokuhweba ukuze athuthukise isipiliyoni sabo sewebhu. Noma kunjalo, abasebenzisi bangenza ibhubhu enonya ngezinhloso ezimbi..Iningi lezinhlawulo ezinkulu zeDDoS zenzeka ngokusebenzisa ezinye zalezi bots. Iwebhusayithi yakho kufanele ikwazi ukuhlukanisa phakathi kwalezi zihlaselo. Ungakwazi futhi ukugcina isikhundla esimisiwe kuma-SERP ikakhulukazi uma isayithi livikelekile. Amawebhusayithi angavikelekile noma angenawo uhlelo oluhle lwe-SEO ahlangabezana nezinkinga eziphathelene nokubeka. Ngaphezu kwalokho, iwebhusayithi ingahluleka kwi-SEO ingxenye uma kunezinyathelo zokuhlasela zogaxekile ezimbalwa noma ezingekho.
Uma wenza ukukhangisa kwe-intanethi, kunesidingo sokuhlaziya ukuqhubeka kwemikhankaso yakho yokumaketha. Abaphathi bewebhu baxhomeke kumaqhinga afana ne-Google Analytics engavimba ugaxekile. Ku-Google Analytics, ungavimbela ithrafikhi ye-Botnet kanye nokunye ukuhlaselwa kogaxekile okubi. Kungenzeka futhi ukuthi usebenzise izinyathelo ezingenza i-web block block yangaphakathi. Ungasebenzisa i-Google Analytics ukwenza ukulethwa kwezinsizakalo zakho kuwebhusayithi kwanele. Ngesilinganiso esifanayo, kunezinye izindlela abaduni abangasebenzisa ukuhambisa ama-botnets.
Amabhizinisi amaningi adinga iwebhusayithi ephumelelayo ukwenza imisebenzi yabo yansuku zonke. Ezimweni eziningi, amawebhusayithi asebenzisa amasevisi njengempendulo yesiphakeli kanye nama-botnets ukwenza imicimbi yabo iphumelele. Uma kwenzeka ukukhwabanisa kwe-intanethi, umsebenzisi angaqala ukuhlaselwa kwe-botnet ngokumelene newebhusayithi. Kulesi simo, sonke isayithi singahlehla futhi siwe, okuholela ekuphazameleni ngendlela le website isebenza ngayo. Esikhathini esedlule, ukuhlaselwa kwe-botnet njengo-Akamai kungabangela imiphumela eminingi emibi ngokuphathelene nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Ungalondoloza isayithi lakho ngokumelene nalezi zihlaselo phakathi kokunye ukuhlaselwa okuningi. Ungenza futhi izinguquko kumakhansela wakho wokumaketha webhu kusayithi lakho Source .